Volavola madinidinika kely (Autoclaves) orinasa | Mpanamboatra sy mpamatsy entana kely etona China (Autoclaves)
Tabletop sterilizer MOST-T (18L-80L)
MOST-T dia karazana sterilizer tabletop izay haingana, azo antoka ary ara-toekarena. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny departemantan'ny sistaolojika, ny departemanta ophthalmological, ny efitrano fandidiana ary ny CSSD hanaovana ny fanamorana ny fitaovana, fonosana, lamba, Hollow A, Hollow B, medium medium, ranon-javatra tsy voaisy tombo, sns.
Mifanaraka amin'ireo torolàlana CE mifandraika amin'izany (toa MDD 93/42 / EEC sy PED 97/23 / EEC) ary ny fenitra manan-danja toy ny EN13060.
Semi-Autoclave Vertical Type Autoclaves LMQ.C (Semi-mandeha ho azy, 50L-80L)
LMQ.C series dia iray amin'ireo sterilizer mitsangana. Mila etona izy ho mpanelanelana amin'ny sterilisation izay azo antoka sy ara-toekarena. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny hopitaly kely, tobim-pahasalamana, andrim-pitsaboana, laboratoara hanaovana ny fanamorana ny lamba, kojakoja, fampitaovana kolontsaina, ranon-javatra tsy misy tombo-kase, fingotra, sns. Ny firafitry ny efitrano mifanaraka amin'ny GB1502011 fanjakana, GB8599-2008, CE ary EN285 Standard.
Auto Vertical Type Autoclaves LMQ.C (mandeha ho azy, 50L-100L)
LMQ.C series dia iray amin'ireo sterilizer mitsangana. Mila etona izy ho mpanelanelana amin'ny sterilisation izay azo antoka sy ara-toekarena. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny hopitaly kely, tobim-pahasalamana, andrim-pitsaboana, laboratoara hanaovana ny fanamorana ny lamba, kojakoja, fampitaovana kolontsaina, ranon-javatra tsy misy tombo-kase, fingotra, sns. Standard.